I-Pixel 3 kaGoogle iyatshisa kwaye ivale xa ubiza | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Kubonakala ngathi ukudala akwanele ifowuni eneempawu ezinomdla zekhameraukuya. Ngeli xesha, el I-Google Pixel 3 iveza enye ingxaki, enye eyongeza kwifayile ye- ezinye iingxaki ukuba ibonisile ukusungulwa kwayo kwintengiso.
Ngoku, ngokusekwe kubasebenzisi abahlukeneyo kwiReddit, i-Twitter, iYouTube, kunye neeforum zemveliso zikaGoogle, I-Pixel 3 iyacima ngelixa ubiza. Siyakwandisa!
Abanye abathengi abathenga iGoogle Pixel 3 entsha bathi isixhobo sinemicimbi etshisayo xa ushaja. Abanini baye bathabatha oku kungahambi kakuhle kumaqonga amajelo onxibelelwano, anje ngala achazwe apha ngasentla, ukuba babelane ngengxaki yobushushu abajongana nayo.
Ngokwento echaziweyo, iifowuni zihlala zishushu ngelixa zitshaja, yeyiphi ibangela ukuba i-terminal icime. Abasebenzisi bePixel 3 babanga ukuba imiba etshisayo inokujongwa ngexesha lokutshaja ngeentambo kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo. Nangona kunjalo, ingxaki ibonakala ngakumbi ngexesha lokutshaja ngaphandle kwamacingo.
Kodwa oku kuchaziweyo kuya kuba yingxaki ngakumbi xa kusetyenziswa. Isixhobo sifudumeza nangakumbi xa kuthathwa amanyathelo athile ngexesha lokutshaja. Umzekelo, ukwenza umnxeba wevidiyo kwandisa kakhulu ubushushu besixhobo. Ukongezwa kuloo nto, izinto ezilula, ezifana nokusasaza ividiyo, kunokubangela ukuba iPixel 3 ishushu kakhulu. Le yingxaki enkulu ngokwenene.
Ukufumana isisombululo kule ngxaki, abasebenzisi bazamile kwitshaja zomntu wesithathu kunye neGoogle Pixel Yima ukubiza iPixel 3. Okwangoku, ingxaki iqhubekile ngendlela efanayo. (Funda: Iingxaki ezininzi ngeGoogle Pixel 3 XL: iingxaki zokwenza izinto ezininzi).
Umfanekiso ongasentla ubonakalisa ukuba nje ukuba ubushushu besixhobo bunyuke ukuya kwinqanaba elithile, i-smartphone ibonisa umyalezo "Ifowuni iyatshisa". Ukuba isixhobo siyaqhubeka shushu, i-Pixel 3 iya kuvala ngokuzenzekelayo ukuthintela umonakalo. Xa isixhobo sisiba shushu ngakumbi nangakumbi ngelixa ushaja, isantya ahlawulisa ngaso sincitshisiwe kakhulu. Abanye abasebenzisi baye bathi iselfowuni siphulukana namandla ebhetri ngexesha lokutshaja xa isixhobo sishushu kakhulu.
Kunzima ukufumanisa ukuba isasazeke kangakanani ingxaki. Kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba ayingabo bonke abathengi abathenga esi sixhobo banengxaki. Abanye abasebenzisi baye kwinqanaba lokucela isixhobo esitshintshayo. Nangona kunjalo, uGoogle akakazukukhupha ingxelo esemthethweni ngalo mbandela. Ngendlela efanayo, oku kunokulungiswa ngohlaziyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Google Pixel 3 iyaqhubeka nokuba neengxaki: ngoku iyatshisa kwaye ivale ngelixa itshaja